Escale à Venise - Chanel - မြင့်မြတ်သောစိတ်ကူးအိပ်မက်
Gabrielle Chanel ၏အိမ်သည်အိမ်သာကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည့်အိပ်မက်မက်နေသောအီတလီဂွမြို့၏ Chanel ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရတနာစုဆောင်းမှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
အသစ်သောရတနာစုဆောင်းမှုအသစ်အတွက် Chanel ဗင်းနစ်မှာရပ်လိုက် အီတလီနိုင်ငံသည် Gabrielle Chanel ၏အထိမ်းအမှတ်များကိုသူမ၏အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုမှအနက်ဖွင့်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာများနောက်ခံကျသောနောက်ခံဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းခြေကြာချိန် - 14 မိနစ်
Escale à Venise - လှုံ့ဆော်မှု
Chanel ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုဒါရိုက်တာ Patrice Leguéreauသည် Mademoiselle Chanel ကဲ့သို့ပင်ဗင်းနစ်ကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးသည်။
လှပသောလေထုပြတိုက်ဖြစ်သောဂွမြို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်းသူသည်ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့်ရေးဆွဲခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Mr Leguéreau၏အမြင်အာရုံသည်စာရွက်ပေါ်တွင် Mademoiselle ကသူမ၏အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသကဲ့သို့အတူတူဖြစ်သည်။
ဗင်းနစ်သည် Gabrielle Chanel အတွက်အရေးပါသည်။ မြို့တော်တွင်သူမအားအင်အားကြီးမားသောအရေးပါသောသင်္ကေတများရှိသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်းà Chanel Escale ။ စုဆောင်းခြင်းများအတွက် Patrice Leguéreau၏လှုံ့ဆော်မှုရေးဆွဲ
အဆိုပါခြင်္သေ့သည်ဗင်းနစ်၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၊ တူးမြောင်းကြီးနှင့်၎င်း၏ဂန္ဒိုလာများနှင့်ကျွန်းငယ်လေးများ၏မြို့တော်အပေါ်အမြင်များသည်မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းမှုအသစ်တွင်သူတို့၏အသံကိုတွေ့ရှိရသည်။ Venise à Escale.
ဒီစုဆောင်းမှုမှာမြင့်မားသောရတနာဖန်တီးမှု ၇၀ ကိုတွေ့ရပြီး ၂၂ ခုမှာတစ်မျိုးတည်းသောအပိုင်းများဖြစ်သည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေထားသည့်အပိုင်း ၅ ပိုင်းနှင့်ရတနာနာရီ ၅ ခုပါသည့်လက်ကမ်းစာစောင် ၄ ခုလည်းရှိသည်။
ဗင်းနစ်၏အရောင်များနှင့်မြို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ပြရန် Chanel သည်စိန်ဖြူ၊ အဝါရောင်စိန်နှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်အပြာနှင့်အဝါရောင်နီလာ၊ မြနှင့်ပတ္တမြားများပါဝင်သည်။
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ ဝိဇ္ဇာ di Venezia ။ ခြင်္သေ့လျှို့ဝှက် Ring ကို။ ၃၀.၉၂ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောရွှေဖြူ၊ စိန်ဖြူ၊ ကူရှင်ဖြတ်ထားသောနီလာတစ်လုံး။
စုဆောင်းခြင်းသည်မျက်လုံးများအတွက်မယုံနိုင်စရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအနီရောင်လှည့်ဖျားများ၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းများ၊ မျက်ကြည်လွှာများ၊ lapis-lazuli, chrysoprase, tsavoritàe garnets, mandarins, nephrite ကျောက်စိမ်းနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ကောင်းမွန်သောကျောက်တုံးများပြသနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Venise à Escale စုဆောင်းမှုကို Chanel အတွက်ရိုးရာအစဉ်အလာဖြစ်သောကြောင့်အဓိကအခန်းကြီးလေးခန်းခွဲထားသည်။
စုဆောင်းမှုအတွက်သင်္ကေတများကွဲပြားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Lion သည်ဗင်းနစ်၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ခွန်အားကိုဆိုလိုသည်။ ဗင်းနစ်သည် ၅ ရာစုမှ ၁၈၀၀ အလယ်ပိုင်းအထိအင်အားကြီးမားပြီးလွတ်လပ်သောရေကြောင်းဆိုင်ရာသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။
မြို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ခြင်္သေ့ဟာနေရာတိုင်းမှာဗင်းနစ်မြို့မှာရှိတယ်။ ထို့အပြင်ခြင်္သေ့သည် Gabrielle Chanel ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၈၈၃ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ခြင်္သေ့သည် Mademoiselle Chanel နှင့်မြို့တော်အကြားအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ဒါဟာကျွန်တော့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့သြဂုတ် ၁၉ ရက်ပါ။ ငါလီယိုနိမိတ်အောက်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူ၌ငါကဲ့သို့အဘယ်သူမျှငါ့ကိုမနာစေခြင်းငှါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ငါကခြစ်တာထက်ပိုခြစ်တာကိုပိုခံပါတယ်။
Pierre Galante ရှိ Gabrielle Chanel, က Les Années Chanel, Mercure က de ပြင်သစ်, 1972, p ။ 322
Venise à Escaleအခန်းကြီး
ဤကျောက်မျက်ရတနာအုပ်စု Eblouissante ကဗင်းနစ်၏အိပ်မက်မက်သည့်ဗိသုကာကိုဂျီ ometric မေတြီလိုင်းများနှင့်ရေးစပ်သီကုံးမှုများအားပြန်လည်ပြောပြသည်။
Chanel, Escale မှ Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Eblouissante အသွင်ပြောင်းလည်ဆွဲနှင့်ပုတီးပန်းရောင်ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်နှင့်စိန်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ တ ဦး တည်း asscher- ဖြတ်စိန် 10.41 ကာရက်, D FL (အမျိုးအစား IIa); 10.52 ကာရက်, D IF စုစုပေါင်းနှစ်ခု asscher- ဖြတ်စိန်။
ထို့အပြင်၊ ဗင်းနစ်၏အဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ baguette နှင့် Asscher ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောစိန်ဖြတ်တောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Eblouissante လက်ကောက်။ ရွှေနှင်းဆီ၊ စိန်ဖြူ၊ ပန်းရောင် spinels နှင့်ပုလဲ။
Baroque နှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းပုံစံများရောနှော။ Eblouissante ရတနာများသည်ငါတို့ကိုမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အိမ်များနှင့်စိန့်မာ့စ်အခြေစိုက်စခန်းရှိရွှေပန်းချီကားများအကြားတွင်သယ်ဆောင်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂရိလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သောဒီဇိုင်းညွှန်းကိန်းများသည်အတော်လေးအင်အားကြီးမားသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်းà Chanel Escale ။ Eblouissante ရှည်နားတောင်း။ ရွှေနှင်းဆီ၊ စိန်ဖြူ၊ ပန်းရောင် spinels နှင့်ပုလဲ။
ဤအခန်းသည် Canal Grande၊ gondolas နှင့်သူတို့၏ gondoliers အကြောင်းဖြစ်သည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ စုဆောင်းမှုများအတွက် Patrice Leguéreau၏လှုံ့ဆော်မှုပုံဆွဲ။
ကျောက်မျက်ရတနာများသည် gondoliers များ၏ပုံမှန် ဦး ထုပ်များ၊ gondolas ၏အဖြူရောင်နှင့်အနီရောင်ရောင်ခြည်များနှင့်သူတို့၏အနက်ရောင် Keel များ၊ ရေပြာရောင်နှင့်ကြိုးအဝါရောင်များကိုပြန်အမှတ်ရကြသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Gran Canale - Volute Croisiere လက်စွပ်။ ရွှေဖြူနှင့်အဝါရောင်၊ စိန်ဖြူများ၊ ပတ္တမြားများနှင့်ကူရှင်တစ်ချောင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြတစ်ခု။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Gran Canale - ရူဘန် Canotier လည်ဆွဲ။ ဗဟို motif သည်အနီရောင်ဖဲကြိုးသည်လေထဲတွင်စီးနေပြီးအထက်မှမြင်ရသော gondolier ၏ ဦး ထုပ်နှင့်တူသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Gran Canale - Volute Crosiere နားကပ်။ စိန်ဖြူ၊ ပတ္တမြား၊
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်းà Chanel Escale ။ Gran Canale - Volute ရေကြောင်းလက်ကောက်။ ရွှေဖြူနှင့်အဝါရောင်၊ စိန်ဖြူ၊ lapis-lazuli ။ သစ်တော်သီးဖြတ်ထားသောစိန်သည် ၂.၁၃ ကာရက်ရှိသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Gran Canale - Volute Venitienne လည်ဆွဲ။ ရွှေဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊ စိန်ဖြူများ၊ ပုလဲများနှင့် lapis-lazuli များ။
ဒီရတနာအစုံဟာ Chanel မှာကြီးမားတဲ့အရောင်အသွေးစုံတဲ့ပွဲတော်ရဲ့အခမ်းအနားပါ။ ဤအခန်းကို camelia သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုဖြင့်စုစည်းထားသောအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
Venise မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှုà Chanel Escale ။ Isole della Laguna, Camelia Baroque ။ Camelia Baroque Ring ကို။ နှင်းဆီနှင့်ရွှေဖြူ၊ စိန်ဖြူ၊ ရှဟံကျောက်၊
Camelia သည် Chanel ၏ပန်းပွင့်သင်္ကေတဖြစ်ပြီးဖက်ရှင်မှဆက်စပ်ပစ္စည်းများအထိမိတ်ကပ်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာများအထိစုဆောင်းထားသည့်နေရာများတွင်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့် Camelia ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ဒဏ်ငွေရတနာစုဆောင်းခြင်း - ဒီမှာကဒီမှာ Venise à Escale မြင့်မားသောရတနာတင်ဆက်မှု။
Baramel, Byzantine နှင့် Venetian Venetian များကစိတ်ကူးစိတ်သန်း (၃) ခုအောက်တွင် camelia ကိုအနက်ဖွင့်သည်။
ဒါကြောင့် 'Camelia Baroque' ဟာအရာဝတ္ထုများ၊ ဒီအစုထဲရှိရတနာများသည်သူတို့၏စိန်ဖြူများနှင့်အလွန်တောက်ပသည်။ အနက်ရောင်ရှဟံကျောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒီဇိုင်းများကိုအဆင့်မြင့်အသံထွက်များဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ Isole della Laguna, Camelia Baroque လည်ဆွဲ။
ရွှေဖြူ၊ စိန်ဖြူများနှင့်အနက်ရောင်ယွန်းများ။ ၁၀.၆၄ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောသစ်တော်သီးတစ်ချောင်း၊ D color FL (Type IIa) ။
'Camelia Byzantin' အစုသည် St Mark's basilica နှင့် Torcello ကျွန်းရှိအနီရောင်၊ နက်ရှိုင်းသော၊ အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်ရွှေရောင်တို့၏ကြွယ်ဝသောရောင်စုံအရောင်များကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။
ကျောက်မျက်ရတနာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်ချက်ချင်းပင်တန်ဖိုးအရှိဆုံး tesserae များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော mosaic ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ Isole della Laguna ။ Camelia Byzantin လည်ဆွဲ။ ရွှေဝါရောင်၊ အဝါရောင်စိန်များ၊ စိန်ဖြူများ၊ အဝါရောင်နီလာနီလာများ၊ carnelian၊ opals များ၊ tsavorite garnets, nephrite ကျောက်စိမ်းနှင့် Onyx တို့ဖြစ်သည်။ ၁၀.၀၇ ကာရက်အလေးချိန်တောက်ပသောအဝါရောင်စိန်တစ်ခု၊ FY VS10.07 ။
နောက်ဆုံးတွင် 'Camelia Venitien' သည် Gabrielle Chanel ၏တိုက်ခန်းတွင်ရှိသောမြို့၏ Baroque ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ဗင်နီယန်ကြေးမုံများမှလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ ဗင်းနစ်။ © Philip GALOWICH
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ Camelia Venitien လည်ဆွဲ။ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်ဖြူများနှင့်ကျောက်ဆောင်များ။ ပန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် ၁.၅ ကာရက်ရှိသောစိန်တစ်ပွင့်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်မျက်ရတနာများ၊ စိန်များနှင့်ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလှပသောပန်းပွင့်များဖြင့်ရွှေရောင်အဝါရောင်များရှိသည်။ ဒီကျောက်မျက်ရတနာပန်းပွင့်များသည် Murano ရဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားတဲ့ဖန်ထည်ပစ္စည်းများကိုအလွန်ထိမိစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ Camelia Venitien Ring ကို။ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်ဖြူများနှင့်ကျောက်ဆောင်များ။
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ Camelia Venitien လက်ကောက်။ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်ဖြူများနှင့်ကျောက်ဆောင်များ။
Maison သည် Gabrielle Chodi ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင့်မားသောရတနာပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းကြောင်း၊ L'esprit du ခြင်္သေ့နှင့်ရတနာရတနာစုဆောင်းမှု, Sous le Signe du ခြင်္သေ့.
ဒါကြောင့်ဒီအထိမ်းအမှတ်ဟာ Chanel ရဲ့ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နေတာကိုမအံ့သြမိပါ။
Chanel Escale မှရတနာရတနာများ - © PHILIPPE GALOWICH
ထို့အပြင်ဗင်းနစ်၏သင်္ကေတဖြစ်သောကြောင့်ခြင်္သေ့၏တည်ရှိမှုနှင့်အရေးပါမှုသည် ပိုမို၍ အားကောင်းလာသည်။
ပင်လယ်မှရောက်ရှိလျှင်စိန့်မာ့ခ်၏ရင်ပြင်ရှိကော်လံ၏ထိပ်တွင်ပေါ်ထွန်းနေသည့်ဗင်းနစ်ခြင်္သေ့ကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်လူတစ် ဦး ၏အကြည့်ကိုကောင်းကင်မှချက်ချင်းပင်ဖမ်းယူနိုင်ပြီးစိန့်မာ့စ်ဘေလီစလီကာ၏မျက်နှာစာတွင်အံ့သြဖွယ်အလှဆင်ထားသည်။
အပြာနှင့်ရွှေတို့သည်ဤအလှဆင်မှုများကြောင့်ကြယ်များသည်နက္ခတ်တာရာ Astrale အစုံကိုရေးရန် Chanel ၏ဒီဇိုင်းနာများလက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒီသတ်မှတ်ချက်မှာကောင်းကင်ရဲ့အပြာရင့်ရောင်ကရွှေမှုန့်တိမ်များဖြင့်ဖြန်းထားသည့် lapis-lazuli ၏ ၀ တ္ထုအဖြစ်သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ပြီးတော့ဒီအဖိုးတန်ကောင်းကင်ကိုထွန်းလင်းတောက်ပဖို့အတွက်ဒီကြယ်စုကိုရွှေကြယ်တွေနဲ့စိန်ဖြူတွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ ကြယ်နက္ခတ်ဗေဒင်လည်ဆွဲ။ ရွှေဖြူ၊ အဝါရောင်ရွှေ၊ စိန်များ၊ အဝါရောင်နီလာများနှင့် lapis lazuli များ။
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ ကြယ်နက္ခတ်နားကပ်။ ရွှေဖြူ၊ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်များ၊ နီလာနီလာများ၊
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ နက္ခတ်ဗေဒင်လက်ကောက်။ ရွှေဖြူ၊ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်များ၊ နီလာနီလာများ၊
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ ကြယ်နက္ခတ်လက်စွပ်။ ရွှေဖြူ၊ ရွှေဝါရောင်၊ စိန်များ၊ နီလာနီလာများ၊
အမှန်မှာ၊ 'Lion Emblématique' အစုတွင်ခြင်္သေ့ခေါင်းသည်ရွှေရောင်အပြည့်ရှိသည့်အဝါရောင်နီလာများဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးအဝါရောင်နီလာများပေါ်လာသည်။
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ ခြင်္သေ့Emblématiqueလည်ဆွဲ။ ရွှေဝါရောင်၊ ပလက်တီနမ်၊ စိန်ဖြူများနှင့်အဝါရောင်နီလာများ
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ ခြင်္သေ့Emblématique Ring ကို။ ရွှေဝါရောင်နှင့်ပလက်တီနမ်၊ စိန်ဖြူများနှင့်အဝါရောင်နီလာများ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော 'Lion Secret' အစုသည်ခြင်္သေ့ကိုအသန့်ရှင်းဆုံးစိန်များ၏အလင်းရောင်အားဖြင့်ထွန်းလင်းစေနိုင်ပြီးယင်း၏လည်ဆွဲသည်ဤစုဆောင်းမှုတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအရှိဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ် Chanel ရဲ့သတိပေးနေပါတယ် Le Paris Russe de Chanel မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Venise မြင့်ရတနာများသို့ Chanel Escale ။ ခြင်္သေ့လျှို့ဝှက်ချက်လည်ဆွဲ။ ၁၅.၅၅ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောသစ်တော်သီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်တလုံးနှင့်အတူရွှေဖြူနှင့်စိန်များ (D FL type IIa)
Venise မြင့်သောရတနာà Chanel Escale ။ ခြင်္သေ့လျှို့ဝှက်ချက်လက်ကောက်။ ရွှေဖြူနှင့်စိန်များ။
ဤနောက်ဆုံးအစုနှင့်ဗင်းနစ်ကိုအုပ်စိုးသည့်သင်္ကေတသည် Gabrielle Chanel နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပိုင်ဆိုင်သောခြင်္သေ့သည်ဘုရင်၏အကြည့်ကိုကြည့်သည်။ Venise à Escale မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းခြင်း။
မှတ်ချက်2ခုEscale မှ Venise - Chanel"
ဟေ့၊ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး၊ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကဒါကိုဝေမျှလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။